भूमि तल: यो के हो। अर्थ र इतिहास
अनुभवहीन एमेच्योर, को stalls स्थित थिएटर को प्रेक्षालय मा सबै भन्दा राम्रो सिट को बहुमत अनुसार। वास्तवमा, यो सबै के आज थिएटर मा प्रशंसक कला नेतृत्व मा निर्भर गर्दछ। साथै, जमीन गर्न neobyazatelno टिकट किन्न सबैभन्दा महंगा स्थानहरू प्राप्त गर्न। यो के हो र किन अब लोकप्रिय छ, यो तपाईं कथा बुझ्न मदत गर्नेछ। थिएटरहरुको मा कोठा निकै आकार मा, क्षेत्र संख्या भिन्न र तदनुसार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद यी ठाउँहरू दर्शक लागि सधैं छन्।
Parterre। यो के हो?
यसलाई दर्शक लागि सिट स्थान चरण (वा अर्केस्ट्रा पिट) बाट सुरु जो र विपरीत पर्खाल वा एम्पिथियटर (उपलब्ध भएमा) संग समाप्त एक थिएटर मा हल, भाग हो। परंपरागत बारेमा एक मीटर को चरण स्तर र अर्केस्ट्रा पिट को स्तर माथि नै दूरी तल स्थित stalls। यो महंगा र राम्रो ठाउँमा छ - पहिले नै उल्लेख रूपमा धेरै laymen को अर्केस्ट्रा को पहिलो पङ्क्ति भन्ने विश्वास गर्छन्। वास्तवमा, यो सधैं साँचो, सबै समय मा सबैभन्दा महंगा टिकट बक्समा थिए किनभने छ। र पहिलो स्थानहरूको सुविधा सधैं जमीनमा जायज छैन। दर्शक एक शास्त्रीय कन्सर्ट सुन्न आएको छ भने, यो आवश्यक विस्तृत मञ्चमा हुन्छ कि सबै कुरा हेर्न हो। अर्को कुरा - एक प्रदर्शन। को stalls को Forefront मा राख्न दर्शक मञ्चमा प्रकट कि कार्यमा संलग्नता एक अर्थमा प्रदान गर्नेछ।
आधुनिक अर्केस्ट्रा को प्रोटोटाइप
आधुनिक अर्केस्ट्रा आधारमा दर्शक को स्थान को विचार प्राचीन रोम मा देखा छ। त्यो त्यहाँ थिएटर मा स्थित थिए जो सीनेटरों लागि बेन्चहरूले थिए।
मध्य युग थिएटर मा, तपाईंलाई थाहा, यो प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, त्यसैले थिएटर नयाँ भवन निर्माण थिएनन्। मात्र कुरा के तपाईं दर्शक मा गणना गर्न सक्छ - यो मन्दिर भित्र प्ले थिए चर्च दृश्य छ। 12 औं शताब्दीमा पनि कौसी मा प्रस्तुति दिन थाले पछि समय, दर्शक थप र थप त भयो। चरण क्षेत्र नै एकदम लामो थियो, र दर्शकहरूलाई यो साथ स्थित गर्न सकिएन।
16 औं शताब्दीमा, सेट नैतिकता र रहस्यहरुलाई बाहिर सार्न बाध्य भए। यो गर्न, यो केही प्रस्तुति encloses। धनी नागरिक खिडकियों र एउटै सडक मा स्थित थिए जो घरहरू, को balconies एक प्रस्तुति हेर्न मौका छ। गरिब नागरिकहरु र तल्लो वर्ग मान्छे पृथ्वीमा स्थान फेला पार्न थियो। सायद, यसैले शब्द अर्केस्ट्रा। फ्रान्सेली "बराबर Terre" संग शाब्दिक "भुइँमा।" अर्थ
भवन घरहरू को कला को rebirth
थिएटर फेरि केवल प्रारम्भिक पुनर्जागरण मा इटाली निर्माण गर्न थाले। आफ्नो परियोजनाहरु को विकास मा को हिसाब छन् र जमिनमा ठाउँ। निर्माण को योजना चरण नजिकै सिट तल्लो वर्ग को मान्छे हुनेछ भनी ग्रहण। तसर्थ, हामी stalls मा सीट प्रदान छैन।
इङ्गल्याण्ड मा 17 औं सताब्दी देखि शुरू भएको stalls मा सिट देखा पर्न थाले। तथापि, तिनीहरूले महान जन्म मात्र मान्छे फाइदा लिन सक्छ। साथै, यी साइटहरू छैन स्थायी थिए। कुर्सी tripped र आवश्यक भएमा साफ।
पहिलो स्थिर कुर्सी बोस्टन मा थिएटर को stalls मा देखियो। यो विचार फ्रान्सेली क्रान्ति पछि architect K. Lida, जो जनता गर्न लोकतान्त्रिक विचार ल्याए द्वारा जीवन ल्याइएको थियो। समानता को विचार जमीनमा शो हेर्न, को जस्तै सुविधाहरु छ जसले दर्शक थियो उल्लेखनीय मान्छे बक्समा।
रूस मा हलहरूमा। यो Pushkin समय मा stalls कस्तो अर्थ राख्छ?
को 18 औं शताब्दीमा रूसी थिएटर र त्यहाँ stalls कुनै महंगा ठाउँहरूमा थिए। पङ्क्तिहरू मात्र दुई - साथै, सिट आफूलाई केही थिए। अर्डर तिनीहरूलाई फाइदा लिन, तिनीहरूले prematurely सदस्यता गर्न भएको थियो। यो मूलतः stately अधिकारीहरु उठयो सक्छ। को सिट कर्ड देखि बन्द तारले थियो जो खाली ठाउँ भनिन्छ Parterre।
को stalls मा सिट अपेक्षाकृत सस्ता थिए, र रचनात्मक मानिसहरूलाई उठयो सक्छ। तिनीहरूले कलाकार, कवि, विद्यार्थी पेश्की केही घण्टा प्रतीक्षा गर्न इच्छुक थिए थिए। लोकप्रिय थियो जो शो, एक भन्दा बढी हजार दर्शक को stalls भेला भन्ने तथ्यलाई। के आधुनिक थिएटर प्रशंसक कल्पना गर्न कठिन छ, यो छ, वास्तवमा, एक सहज ठाउँ लिन, जवानहरू प्रदर्शन अघि तीन घन्टा आउनुहोस्। सस्ता ठाउँमा मात्र तिनीहरूले बालकनी थिए जो जमीन, थिए।
रूस मा, साथै युरोप मा रूपमा, दर्शक स्थिति द्वारा तिनीहरूलाई पत्राचार ठाउँलाई कब्जा।
आधुनिक भूमि तल। टिप्पणी र दर्शकहरूलाई को राय
स्थिति हाम्रो समय मा थोडा परिवर्तन भएको छ। थिएटर प्रशंसक बीच ठूलो लोकप्रियता अझै stalls गरिन्थ्यो। आधुनिक थिएटर मा के छ?
को अर्केस्ट्रा को बाधा गर्न जमीन समानान्तर मा नियुक्तिहरु। थप सुविधाको लागि, दर्शक तिनीहरूले हल को बाहिर निस्कन नेतृत्व भन्ने walkways द्वारा विभाजित छन्। राम्रो दृश्यता अन्तिम पहिलो श्रृंखला को तल्ला स्तर वृद्धि गरी प्रदान गरिएको छ। दर्शकहरूले बहुमत अनुसार, जमीन मा सबै भन्दा राम्रो सातौं पङ्क्ति को केन्द्रीय ठाउँ छन्। तिनीहरूले प्रदर्शन को स्पष्ट सिंहावलोकन र सबै भन्दा राम्रो श्रवणशास्त्र, जो एक थप समग्र दृश्य लिन अनुमति दिन्छ प्रदान गर्नुहोस्।
Rybinsk नाटक थिएटर: बिलबोर्ड इतिहास
को थिएटर Mayakovsky मेट्रो प्राप्त गर्न कसरी
आफ्नै हातले तालिका थिएटर तस्वीर कसरी बनाउने?
मशरूम र प्याज र अन्य स्वादिष्ट व्यञ्जनहरु संग अनाज
जस्ती बेड लेपित: फोटो, समीक्षा
कला। 723 को नागरिक कोड को। ठेकेदार काम को अनुचित गुणस्तर लागि जिम्मेवार
रूस केही शहर मा एक मेट्रो छ
"Gamavit" बिरालो: सङ्केत गर्छ र प्रयोगको तरिका